Index - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ao amin’ny taratasiny faharoa nosoratan’i Paoly ho an’ny Korintiana, dia nanome fanoharana faran’izay tsara izy ny amin’ny fomba mahakasika ny fiainan’ny mpino amin’ny fomba azo ampiharina ilay fanomezam-pahasoavana mahatalanjona. “Fa ampahafantarinay anareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena ny fiangonana any Makedonia” (2 Kor. 8,1). Tsy nanao fitantarana tsy misy dikany fotsiny i Paoly fa tiany ireo rahalahy Korintiana mba hamaly ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fomba mitovy amin’ny an’ny fiangonana Tesalonika. Tiany ny hilazalaza amin’izy ireo ny valinteny marina sy mahavokatra ny amin’ny fahalalahan-tanan’Andriamanitra. Nomarihin’i Paoly fa nanana “fahoriana be” sy “mahantra indrindra” ny Makedoniana—...
Ny Fiangonana, tenan’i Kristy, dia fikambanan’izay rehetra mino an’i Jesoa Kristy sy itoeran’ny Fanahy Masina. Ny fiangonana dia nirahina hitory ny filazantsara, hampianatra izay rehetra didin’i Kristy hatao batisa, ary hiandry ny ondry. Amin’ny fanatanterahana izany iraka izany, ny Fiangonana, izay tarihin’ny Fanahy Masina, dia mandray ny Baiboly ho tari-dalana ary mitodika hatrany amin’i Jesoa Kristy, lohany velona (1. Kor 12,13; Rom 8,9; Matio 28,19-20; tsang 1,18; Efes 1,22). Ny fiangonana amin’ny maha-fivoriana masina “... tsy ny fivorian’ny olona mitovy hevitra no mahaforona ny fiangonana, fa amin’ny alalan’ny…
Tao amin’ny taratasiny ho an’ny Romana, i Paoly dia nanontany tamim-pitenenana hoe: “Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana, sa fahoriana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?” (Rom. 8,35). Marina tokoa fa tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy, izay aseho mazava amintsika eto, araka ny vakintsika ao amin’ireo andininy manaraka manao hoe: “Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na hery, na fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ankehitriny, na inona na inona Avia, na ny ambony, na ny ambany, na ny zavaboary hafa rehetra, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” Rom. 8,38-39). Isika dia tsy afaka…
Nipetraka tany Betania i Maria sy Marta ary Lazarosy, tokony ho telo kilaometatra atsimoatsinanan’ny Tendrombohitra Oliva avy ao Jerosalema. Tonga tao an-tranon’i Maria sy Marta izy mirahavavy. Inona no homeko raha mahita an’i Jesosy tonga ao an-tranoko aho anio? Hita, heno, azo tsapain-tanana ary azo tsapain-tanana! “Fa nony nandroso izy ireo, dia tonga tao amin’ny vohitra anankiray Izy. Nisy vehivavy atao hoe Marta nampiantrano Azy » (Lk 10,38). I Marta angamba no zokin’i Maria satria izy no voatonona voalohany. «Ary nanana rahavavy atao hoe Maria izy; nipetraka teo an-tongotry ny Tompo izy ka nihaino ny teniny » (Lk 10,39). Maria dia avy amin'i Jesosy...
Jesosy no fampihavanana ataontsika
Nandritra ny taona maro dia nifady hanina tamin'i Yom Kippur (Alemanina: Andro fanavotana) aho, andro fety jiosy avo indrindra. Nataoko izany tamin'ny fiheverana diso fa mihavana amin'Andriamanitra aho amin'ny alàlan'ny fialan-tsasatra fatratra amin'ny sakafo sy ranoka amin'izany andro izany. Betsaka amintsika no mety hahatadidy an'io fomba fisainana diso io. Na izany aza dia nohazavaina tamintsika izy, ny fikasana hifady hanina amin'i Yom Kippur dia tafiditra ao amin'ny fampihavanantsika (son-ung [= fananganana ho zanaka, naoty ny Ü]) miaraka amin'Andriamanitra mba hahatratrarantsika amin'ny asantsika manokana. Nampihatra rafitra ara-pivavahana momba ny fahasoavana miampy asa isika - tsy mijery ny zava-misy izay i Jesoa no fampihavanantsika. ...
Amin'ny 14. Febroary isan-taona, ireo mpifankatia eran-tany dia manambara ny fifankatiavany tsy mety maty. Ny fomba amam-panao amin'izao andro izao dia miverina amin'ny fetin'i Md Valentinus, izay nampidirin'ny Papa Gelasius tamin'ny taona 469 ho andro fahatsiarovana ny fiangonana manontolo. Maro ny olona mampiasa io andro io mba hanehoana ny fitiavany olona iray. Ny tantaram-pitiavana kokoa amintsika dia manoratra tononkalo sy milalao hira ho an'ny olon-tiany na manome mamy miendrika fo amin'io andro io. Ny fanehoana fitiavana dia mitaky drafitra be dia be ary misy vidiny. Rehefa tao an-tsaina ireo eritreritra ireo dia nanomboka niresaka momba an'Andriamanitra sy ny fitiavany an'Andriamanitra aho ...
Andriamanitra Ray no olona voalohany amin’ny maha-Andriamanitra, Ilay tsy niandohany, izay nipoiran’ny Zanaka talohan’ny mandrakizay ary nivoahan’ny Fanahy Masina mandrakizay tamin’ny alalan’ny Zanaka. Ny Ray, izay nahary ny zavatra rehetra hita sy tsy hita tamin’ny alalan’ny Zanaka, dia naniraka ny Zanaka ho famonjena sy manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena antsika ho zanak’Andriamanitra. (Johanes 1,1.14, 18; Romana 15,6; Kolosiana 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; Romana 8,14-17; Asan’ny Apostoly 17,28). Andriamanitra - Fampidirana Ho antsika Kristianina, ny finoana fototra indrindra dia ny hoe misy Andriamanitra. Eo ambanin'ny "Andriamanitra" - tsy misy lahatsoratra, tsy misy fanampiny ...
Ny famonjena dia ny famerenana amin’ny laoniny ny fiombonan’ny olombelona amin’Andriamanitra sy ny fanavotana ny voary rehetra amin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fahafatesana. Tsy ho an’izao fiainana izao ihany no omen’Andriamanitra famonjena, fa ho an’ny mandrakizay ho an’ny olona rehetra izay manaiky an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny famonjena, natao tamin’ny alalan’ny fahasoavana, nomena tamin’ny finoana an’i Jesosy Kristy, fa tsy mendrika ny tombontsoa manokana na ny asa tsara. (Efesiana 2,4- enina ambin'ny folo; 1. Korintiana 1,9; Romana 8,21- enina ambin'ny folo; 6,18.22-23) Famonjena - asa famonjena! Ny famonjena, ny fanavotana dia asa famonjena. Mba hanatonana ny teny hoe "famonjena"...
Anna, vehivavy antitra antitra, dia nody rehefa avy niasa saina nandritra ny andro tao am-piasana. Nipetraka irery tao amin'ny efitrano malalany sy maotina izy. Nipetraka teo amin'ny sezalony efa tonta izy. Mitovy ny isan'andro. "Foana tokoa ny fiainana," hoy izy nieritreritra fatratra. "Irery irery aho". Tao amin'ny tanàna ambanivohitra tsara tarehy, dia nipetraka teo amin'ny terrasiny i Gary, mpandraharaha nahomby. Avy tany ivelany dia toa nilamina ny zava-drehetra. Nahatsapa fahabangana anaty izy. Olona samy hafa. Toe-javatra samihafa. Olana iray ihany. Tsy afaka mahazo fahafaham-po marina amin'ny olona ny olona ...
Mampitaha, manombatombana ary mitsara
Miaina ao anatin'ny tontolo izay miaina mifanaraka amin'ny teny filamatra voalohany isika: "Tsara isika fa ny hafa kosa ratsy". Isan'andro isika dia maheno vondrona mivazavaza amin'ny olon-kafa noho ny antony ara-politika, ara-pinoana, ara-pirazanana na ara-tsosialy sy ara-toekarena. Toa manaratsy izany ny haino aman-jery sosialy. Ny hevitsika dia azo omena an'arivony maro, mihoatra ny ilaintsika, ela be alohan'ny fotoana ananantsika misaintsaina ireo teny sy mamaly azy ireo. Mbola tsy afaka nifampiantsoantso haingana sy mafy toy izany ireo vondrona samihafa. Jesosy dia nitantara ny amin'ilay Farisianina sy ilay mpamory hetra izay ...
Ny helo no fisarahana sy fisarahana amin'Andriamanitra nofidian'ny mpanota tsy mety simba. Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny helo dia antsoina hoe "farihy afo", "haizina" ary Gehena (aorian'ny lohasaha Hinnom akaikin'i Jerosalema, toerana fandoroana fako). Ny helo dia faritana ho sazy, fijaliana, fijaliana, faharavana mandrakizay, fidradradradrana ary fikitroha-nify. Sheol sy Hades, teny roa avy amin'ny fiteny tany am-boalohany ao amin'ny Baiboly izay nadika matetika hoe "helo" sy "fasana", dia manondro ny fanjakan'ny maty ny ankamaroany. Mampianatra ny Baiboly fa ny mpanota tsy mibebaka dia hijaly amin'ny fahafatesana faharoa ao amin'ny farihy afo, saingy tsy milaza mazava tsara raha ...
“Avia fotsiny tahaka anao!” Fampahatsiahivana izany fa hitan’Andriamanitra ny zava-drehetra: ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra ary mbola tia antsika izy. Ny antso ho tonga amin’ny maha-isika anao dia taratry ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Romana manao hoe: “Fa Kristy maty hamonjy antsika, na dia malemy aza isika. Zara raha misy maty noho ny amin’ny olo-marina; noho ny hatsaram-panahiny dia azony atao ny mikely aina. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika” (Rom 5,6-8e). Betsaka ny olona ankehitriny no tsy mieritreritra akory ny amin’ny ota. Ny ankehitriny sy ny...
Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia famerenana amin'ny laoniny ny fiainana. Inona no fiantraikan'ny fiainan'i Jesosy tafaverina amin'ny laoniny amin'ny fiainanao isan'andro? Ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara zava-miafina afaka miaina fiainam-baovao ao aminao: "Hianareo efa nianatra hatramin'ny voalohany, eny, izay nafenina taminao avy tamin'ny zanak'olombelona rehetra: zava-miafina izay efa naseho ankehitriny ho an'ny Kristiana rehetra. Momba ny fahagagana tsy takatry ny saina izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ambonin'ny tany. Ianao izay an'Andriamanitra dia avela hahalala an'io zava-miafina io. Izao no vakiny: Kristy velona ao aminao! Ary noho izany dia manana fanantenana mafy ianao fa Andriamanitra ...
Raha mitady ny teny hoe mofo ao amin’ny Baiboly ianao, dia hahita azy io ao amin’ny andininy 269. Tsy mahagaga izany satria ny mofo no foto-tsakafon'ny sakafo isan'andro any Mediterane sy ny sakafon'ny sarambabem-bahoaka. Ny voamadinika dia manome ny ankamaroan'ny proteinina sy ny gliosida ho an'ny olombelona nandritra ny taonjato maro ary na dia an'arivony taona maro aza. Nampiasa ny mofo ara-panoharana i Jesosy tamin’ny naha-mpanome aina azy, ka nilaza hoe: “Izaho no mofo velona izay avy any an-danitra. Izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko - ho fiainan’izao tontolo izao » (Jao 6,51). Jesosy dia niresaka tamin'ny vahoaka izay...
Ny faminaniana dia manambara ny sitrapon’Andriamanitra sy ny drafitra ho an’ny olombelona. Ao amin’ny faminanian’ny Baiboly, Andriamanitra dia manambara fa voavela ny fahotan’ny olombelona amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny finoana ny asa fanavotana nataon’i Jesosy Kristy. Ny faminaniana dia manambara an'Andriamanitra ho Mpamorona sy Mpitsara ny zava-drehetra ary manome toky ny olombelona ny fitiavany, ny fahasoavany ary ny tsy fivadihany ary mandrisika ny mino hanana fiainana araka an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. (Isaia 46,9-11; Lioka 24,44-48; Daniela 4,17; Joda 14-15; 2. Petrus 3,14) Ny finoantsika momba ny faminanian’ny Baiboly Kristianina maro no mila topimaso momba ny faminaniana voalaza etsy ambony, mba hahatakarana ny faminaniana avy amin’ny...
Ampiasao ny fanomezana fanomezana fotoana
Tamin'ny 20 septambra dia nankalaza ny taom-baovao ny jiosy, festival misy dikany maro. Ka mankalaza ny fiandohan'ny tsingerin-taona ny olona iray, mankalaza ny famoronana an'i Adama sy Eva ary mahatsiaro ny famoronana an'izao rehetra izao koa, izay misy ny fiandohan'ny fotoana. Rehefa namaky momba ny fotoana aho dia tadidiko fa ny fotoana koa dia misy dikany maro. Ny iray amin'izy ireo dia ny fotoana dia fananana mitovy amin'ny an'arivony tapitrisa sy mpangataka. Manana 86.400 segondra isan'andro isika rehetra. Nefa satria tsy azontsika atao ny tehirizina (tsy azo ahemotra na hahemotra ny fotoana) dia mipetraka ny fanontaniana: "Ahoana no ampiasana ny fotoana ...
Ahoana no fahitanao ny fahalalanao?
Antsoina hoe olan'ny vatana ny saina (olana ara-batana koa) eo amin'ireo filozofa sy teolojiana. Tsy resaka olan'ny fandrindrana maotera tsara (toy ny misotro sotro amin'ny kaopy nefa tsy mandraraka na manipy zana-tsipika diso). Fa kosa, ny fanontaniana dia hoe ara-batana ve ny vatantsika ary ara-panahy ny eritreritsika? Na, raha atao amin'ny fomba hafa, na ny olona dia tena ara-batana fotsiny na fitambaran'ny ara-batana sy ara-panahy. Na dia tsy miresaka mivantana ny olan'ny vatana aza ny Baiboly, dia misy firesahana mazava momba ny lafiny tsy ara-batana amin'ny fisian'ny olombelona sy ...
Indraindray ny olona dia sosotra amin'ny fampianarana kristiana fa ny famonjena dia amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika pluralistic, antenaina ny fandeferana, takiana tokoa, ary ny foto-kevitry ny fahalalahana ara-pivavahana (izay mamela ny fivavahana rehetra) dia adika indraindray fa midika fa marina daholo ny fivavahana rehetra. Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany, hoy ny sasany, toy ny hoe nandeha an-tongotra daholo izy ireo ary niverina avy tany amin'ny nalehany. Tsy mampiseho fandeferana amin'ireo olona marenina izy ireo izay tsy mino afa-tsy amin'ny fomba tokana, ary nolaviny, ohatra, ny fitoriana ny filazantsara amin'ny maha ...
Ny filazantsara dia vaovao mahafaly momba ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy. Izao no hafatra fa Kristy maty noho ny fahotantsika, dia nalevina, araka ny Soratra Masina, natsangana tamin’ny andro fahatelo, ary niseho tamin’ny mpianany. Ny filazantsara dia ny vaovao tsara ahafahantsika miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa famonjen’i Jesosy Kristy. (1. Korintiana 15,1-5; Asan'ny Apostoly 5,31; Lioka 24,46-48; John 3,16; Matio 28,19-20; marika 1,14-15; Asan'ny Apostoly 8,12; 28,30-31) Nahoana ianao no teraka? Natao ho tanjona izy ireo! Namorona antsika tsirairay Andriamanitra noho ny antony iray - ary ...
Tratry ny taona! Manantena aho fa nanana fotoana fialan-tsasatra mahafinaritra niaraka tamin'ny olon-tianao ianao. Ankehitriny satria eo aoriantsika ny vanim-potoanan'ny krismasy ary miverina miasa any am-piasana isika amin'ny taom-baovao, dia nifanakalo hevitra tamin'ny mpiasanay momba ny fialantsasatra efa lany izahay, toy ny mahazatra amin'ny tranga toy izany. Niresaka momba ny fomban-drazana izahay sy ny zava-misy fa afaka mampianatra anay momba ny fankasitrahana matetika ireo taranaka taloha. Tamin'ny resadresaka nifanaovana iray dia nilaza tantara iray mampihetsi-po ny mpiasa iray. Nanomboka tamin'ny raibe sy renibeny izany, izay olona malala-tanana tokoa. Fa mihoatra ny ...
Ity taratasy ity no taratasiko farany isam-bolana amin'ny maha mpiasa anao ao amin'ny GCI satria miala sasatra amin'ity volana ity aho. Rehefa misaintsaina ny naha-filohan'ny antokom-pinoana ahy aho dia fitahiana maro no tonga tato an-tsaiko izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny iray amin'ireo fitahiana ireo dia misy ifandraisany amin'ny anarantsika - Grace Communion International. Heveriko fa mamaritra amin'ny fomba tsara tarehy ny fiovantsika lalina amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anay. Tamin'ny alàlan'ny fahasoavana (fahasoavan'Andriamanitra) dia tonga vondrom-pinoana (fiombonambe) mifototra amin'ny fahasoavana isika, izay ao anatin'ny fiombonan'ny Ray, Zanaka ary Masindahy ...
Ny Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra
Ny olon-drehetra dia samy manana ny heviny momba ny tsara sy ny ratsy ary samy nanao zavatra tsy nety tamin'ny saim-pantany avy. “Olombelona ny manao diso”, hoy ny ohabolana malaza iray. Nandiso fanantenana ny namany ny olon-drehetra tamin'ny fotoana iray, nanitsakitsaka ny fampanantenany, nandratra ny fon'ny hafa. Fantatry ny rehetra fa meloka. Ka ny olona tsy te-hifandray amin'andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantatr'izy ireo fa tsy afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, saingy fantany koa fa tsy nankatò izy ireo. Mahatsiaro ho menatra sy meloka ianao. Ahoana no ahafahan'ny ...
Mankany amin'Andriamanitra ve ny làlana rehetra? Ny sasany mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova amin'ny lohahevitra iray ihany - ataovy izao na izaroa ary mankany an-danitra. Raha vao jerena dia toa izany. Mampanantena ny firaisankina amin'ny Andriamanitra tsy mihetsika ny Hindoisma. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mitaky asa tsara amin'ny fahaterahana indray. Ny Buddhism, izay mampanantena ihany koa ny nirvana, dia mitaky hitazona ireo fahamarinana lehibe efatra sy ny làlana valo ambin'ny famerenana fahaterahana maro. Mampanantena paradisa ny finoana silamo - fiainana mandrakizay feno fahafaham-po sy fahafinaretana ara-nofo. Mba hahatongavana any, ny mpino dia tsy maintsy ...
Amin'ny 12. Tamin'ny 1961 Aprily 2000, nijanona izao tontolo izao ary nijery an'i Rosia: Yuri Gagarin no lehilahy voalohany teny amin'ny habakabaka, hoy aho, satria nandresy an'i Rosia tamin'ny hazakazaka an-habakabaka i Israely. Mba hahatakarana io fanambarana adala io dia tsy maintsy miverina amin'ny fotoana taona eo ho eo isika. Misy tanàna kely iray antsoina hoe Betlehema, izay nandrahona ny ho safotry ny mpivahiny. Lehilahy efa reraka no nikaroka ireo trano hipetrahana teo an-toerana nefa tsy nahita toerana hatoriana ho azy mivady. Navelan'ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny iray sariaka natory tao amin'ny trano fiompiana teo akaikin'ny biby i Josef sy ny vadiny bevohoka be. Ao amin'ny…
Androany maraina dia nijoro teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana hoe: fitaratra, fitaratra eo amin'ny rindrina, iza no tsara indrindra amin'ny firenena? Dia hoy ny fitaratra tamiko: Afaka mifindra amin'ny sisiny ve ianao azafady? Fanontaniana iray no apetrako aminao: «Mino ny zavatra hitanao ve ianao na matoky an-jambany? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te hanana mazava ny zava-misy iray: velona Andriamanitra, misy Izy, mino izany na tsia! Andriamanitra tsy miankina amin'ny finoanao. Tsy ho velona izy rehefa miantso ny olona rehetra hino isika. Izy koa dia tsy ho ambany Andriamanitra raha tsy te-hahafantatra zavatra momba azy isika! Inona ny finoana iainantsika ...
Andian-teny efa henontsika rehetra taloha. Albert Schweitzer dia nanoritsoritra ny hoe "ao amin'i Kristy" ho zava-miafina lehibe amin'ny fampianaran'ny apôstôly Paul. Ary Schweitzer dia tsy maintsy nahalala rahateo. Amin'ny maha teolojianina malaza, mpitendry mozika ary dokotera misiônera malaza azy, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemanina niavaka indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 dia nahazo ny loka Nobel izy. Tao amin'ny bokiny The Mysticism of the Paul Paul, navoaka tamin'ny 1931, Schweitzer dia nanantitrantitra ny lafiny manan-danja fa ny fiainana kristiana ao amin'i Kristy dia tsy Andriamanitra-mistisista, fa, araka ny iantsoany azy manokana, mistika kristiana. Fivavahana hafa, ao anatin'izany ny mpaminany, ...
Fanapahan-kevitra amin'ny fiainana isan'andro
Ny Fanahy Masina: mitoetra ao amintsika Izy!
Ny fasana foana: inona no ao aminao?
Fitsangatsanganana: sakafo tsy hadino
Immanuel - Momba antsika Andriamanitra
Teolojia Trinitas izay mifototra amin'i Kristy
Olana virus virus
Mankanesa at me amiko!
Dingana goavana ho an'ny olombelona
Afaka mahavita izy!
Ahoana ny hevitrao ny teny hoe Andriamanitra?
Ny lanjantsika marina
Fifandraisana: modely an'i Kristy
Mikaroka ny fandriam-pahalemana anaty
Andriamanitra manome antsika ny tena fiainana
Fitsipika fototra dimy momba ny fanompoana
Inona ireo fanomezana tsara?
Mbola betsaka ny zavatra afaka manoratra
Aoka hamirapiratra ny fahazavan'i Kristy
Nahoana no misy faminaniana?
Jesosy - ny fahendrena samirery!
Pond na renirano?
Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!
Ny voalohany dia tokony ho farany!
Romana 10,1-15: Vaovao mahafaly ho an'ny rehetra
Alefaso amin'ny Tompo ny asanao
Jereo ny fitoriana filazantsara amin'ny alàlan'ny solomasin'i Jesosy
Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra
Fanapahan-kevitra na vavaka
Miandry ny tranonao any an-danitra ve ianao?
Fanaterana an'i Jesosy Virjiny
Tian'Andriamanitra ny olona rehetra
Amin'ny vatana inona no hitsanganan'ny maty?
Mihatra amin'ny Kristianina ihany koa ny lalàn'i Mosesy?
Izay nolazain'i Jesosy momba ny Fanahy Masina
Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ao amin'ny Salamo
Famelan-keloka: fanalahidy lehibe
Andriamanitra dia ...
Manaraka ny serivisy
I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?
Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?
Ny foto-pinoan'ny Atheisisme Vaovao
Izay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"
Maninona no tsy mamaly ny vavaka ataoko Andriamanitra?
Ny fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"
Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika?
Matio 5: Toriteny teo an-tendrombohitra (Fizarana 1)
Arovy amin'ny mpandimby anao aho
Ny fanomezana Krismasy tsara indrindra
1914-1918: "Ny ady izay nahafaty an 'Andriamanitra": valiny
Ampiasao ireo zavatra rehetra azo atao
Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!
Amin'ny iraka miafina
Salamo 9 sy 10: fiderana sy fiantsoana
Ny tena maha-izy antsika sy ny dikany
Famerenana indray ny taratasy ho an'ny Romana
Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana
Ny fanovana ny rano ho divay
Karl Barth: Mpaminanin’ny Fiangonana
Ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny helo - Famalian'Andriamanitra na olombelona?
Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika
Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?
Manapa-kevitra ny hijery an 'Andriamanitra
Mahagaga tokoa ny fitiavan'Andriamanitra
Andron'ny trompetra: Andro firavoravoana natao tao amin'i Kristy
Vavaka - mihoatra ny teny fotsiny izany
Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy
(K) fiverenana amin'ny mahazatra
Ny Filazantsara - Zavatra marika?
Ny fanomezana ny reny
Fiakarana sy fiverenan'i Kristy
Ny firaisana ao amin'ny fahasamihafana
Ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny sy ho avy
Niakatra ny lanitra - sa tsy izany?
Ny vaovao mahafaly momba ny filazantsara?
Jesosy no asa tonga lafatra famonjena
Fanomezana ara-panahy dia omena amin'ny serivisy
Ny finoana ara-tantara
Inona no filaharana iraka lehibe?
Noheverin'i Joseph Tkach
Iza na inona ny Fanahy Masina?
Mamelà ny helokay amin'ny fitondran-tena ratsy nataontsika
Ny andraikitry ny fiangonana
Ny Baiboly - Tenin'Andriamanitra?
Inona ny hafatr'i Jesosy Kristy?
Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?
Afaka matoky ny Fanahy Masina ve ianao?
Voaforona ho antsika
Ahoana no fomba tokony hivavahako amin'ny fomba mahomby?
Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra
Ny tena ilaina indrindra amin'ny zanak'olombelona
Jesosy omaly, anio ary mandrakizay
Maivana, andriamanitra ary fahasoavana
Miambena tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra
fampiharana ny vavaka
Ny fankasitrahantsika ny batisanay
Ankalazao ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty
Fahitana tsy hita
Mamirapiratra ao amin'ny maizina i Kristy